Akụkọ - Kedu nha waya ọkụkọ ka m kwesịrị iji?
Waya ọkụkọ na-abịa na nlele dị iche iche.Guages ​​bụ ọkpụrụkpụ nke waya ma ọ bụghị nha oghere.Ihe dị elu nke nlele ahụ, waya ahụ dị gịrịgịrị.Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ waya nlele 19, waya a nwere ike ịdị ihe dịka 1mm.N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịhụ waya nlele 22, nke nwere ike ịdị ihe dịka 0.7mm.
Nha ntupu (nha oghere) dịgasị site na nnukwu nnukwu na 22mm ruo obere obere na 5mm.Kedu nha ị na-ahọrọ, ga-adabere na anụmanụ ndị ịchọrọ idobe ma ọ bụ pụọ na mpaghara.Ntupu waya iji mee ka oke na òké ndị ọzọ pụọ n'ọkụ ọkụkọ dịka ọmụmaatụ, ga-adị ihe dịka 5mm.
Waya na-abịakwa n'ogo dịgasị iche iche, a na-ekwukarị ya dị ka obosara.Ọzọ dabere na nha anụmanụ, ga-ekpebi ịdị elu achọrọ.N'ezie, ọkụkọ anaghị efe dị ka iwu mana ha nwere ike iji nku ha nweta elu!Na-aga site na ala ruo perch gaa n'elu ụlọ nke coop na mgbe ahụ n'elu ngere na sekọnd!
Waya ọkụkọ 1 mita bụ obosara kachasị ewu ewu mana ọ siri ike ịchọta.A na-ahụkarị ya n'obosara 0.9m ma ọ bụ 1.2m.Kedu nke n'ezie, enwere ike igbutu obosara achọrọ.
A na-atụ aro ka ị nweta ụdị ụlọ n'elu ọkụkọ ọkụkọ, ma nke ahụ bụ ụlọ siri ike ma ọ bụ nke ejiri waya ọkụkọ mee.Ndị na-eri anụ, dị ka nkịta ọhịa bụ ndị na-arị elu nke ọma na ha ga-eme ihe ọ bụla iji ruo anụ oriri ha.
Oge nzipu: Ọktoba 18-2021